မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင် တွင် ပါဝင်သော မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၏ ရုံးစိုက်မြို့ဖြစ်သည်။ မြို့နယ် လူဦး ရေမှာ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ ၈၉,၅၉၃ ယောက်ခန့် ရှိသည်။ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ကို အရပ်ထဲ၌ မော်ကျွန်းဟု ခေါ်လေ့ရှိကြသည်။မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သည် ဧရာဝတီမြစ်၏ မြစ်ခွဲတစ်ခု ဖြစ်သော ရာဇူဒိုင်မြစ်နှင့် တုံးလဲချောင်းတို့ဆုံရာ ကျွန်းငယ် တစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ မြို့သည် အလျား ၂ မိုင်၊ အနံ ၁. ၅ မိုင်ခန့်ရှိ၍ ၁. ၂၂၂ စတုရန်းမိုင်ခန့် ကျယ်ဝန်းသည်။
ကိုလိုနီတစ်ခေတ်လုံး မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြခရိုင်အတွင်း တည်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၈၅၂ခုနှစ်အချိန်က မော်လမြိုင်ကျွန်းမရှိသေးပေ။ ထိုအချိန်က မြို့နေရာတွင် သစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ ကြိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ နေထိုင်ရာ တံငါရွာကလေးသာရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၌ ထူထပ်လှသော သစ်တောကြီးများသာ ရှိသည်။ ဗြိတိသျှတို့ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ၂၈ နှစ်အကြာတွင်မှ မော်လမြိုင်ကျွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောအချိန်ကား ၁၈၈၀ပြည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်ကမြို့အသွင်၊ မြို့အဆင့်သို့ ပီပီပြင်ပြင်ရောက်ရှိမလာခဲ့သေးပေ။
မြို့အသွင်သို့ ပီပီပြင်ပြင်မရောက်သေးသော်လည်းထိုအချိန်က မော်လမြိုင်ကျွန်းသည် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်သော ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးရုံးစိုက်ရာ ရန်ကုန်မြို့ နှင့်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးစာပို့သင်္ဘောကြီးဆိုက်ကပ်ရာ၊အညာကုန်များ ဖြန့်ဖြူးရာအထက်ဘက် ညောင်တုန်းမြို့နှင့်လည်း ကောင်း၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းအောက်ဘက်လှိုင်းဘုန်းနှင့်လည်းကောင်း၊ အနောက်ဘက်ရှိ ခရိုင်ဝန်ရုံးစိုက်ရာ မြောင်းမြနှင့်လည်းကောင်း ရေကြောင်းခရီးဖြင့်ဆက်သွယ်သွားလာရန်လွယ်လည်းလွယ်ကူသည်။လမ်းဆုံလည်းကျသည်။သို့ဖြင့်အညာကုန်၊ အောက်ကုန်များရောင်းဝယ်စည်ကားလာခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြို့အမည် ပညတ်ရန် လိုအပ်လာ၍ မြို့တွင်ပေါက်သော မော်လမြိုင်ပန်းများ စိမ်းလန်းဝေဆာစွာ နေရာအနှံပေါက်နေ၍ လည်းကောင်း ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေသည့် ကျွန်းသဖွယ် ဖြစ်ပေါ်နေ၍လည်းကောင်း မော်လမြိုင်ပန်းများ ပေါက်ရောက်ရာကျွန်းကို အစွဲပြု၍ အနွတ္တအမည် မော်လမြိုင်ကျွန်းဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း မြို့တည်စက မြို့နေရာသည် ရာဇူဒိုင်မြစ်၊ တုံးလှဲမြစ်တို့၏တွေဆုံရာ သန်လျှက်ခုံပမာဖြစ်ပြီး သစ်ပင်၊ ပန်းပေါင်းစုံတို့ဖြင့် လွှမ်းခြုံ အုံ့ဆိုင်းလျက် မှိုင်းမှိုင်းညို့ညို့ဖြင့် ကြည်နူးစရာ ကောင်းပြီး၊ ဘုရားလောင်းဥဒေါင်းမင်းစံပျော်ရာ မောရမြိုင်နှင့်အလား သဏ္ဏန် တူသည့်ကျွန်းဟု မှတ်ယူကာ မြို့အမည်ကို 'မောရမြိုင်ကျွန်း' သို့မဟုတ် 'မော်လမြိုင်ကျွန်း'ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။
မြို့အဆင့်သို့ မရောက်ရှိသေးသည့် ၁၈၉၉ ခုမတိုင်မီက မော်ကျွန်းမြို့၏ တောင်ဘက်အချို့ဒေသများ၌ တောကြီးများ ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသော်လည်း တောကြီးများကို တစ်စတစ်စခုတ်ထွင်ကာ စပါးစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ၁၉၀၃/၁၉၀၄ခုနှစ်တွင်မူ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အတွင်း စပါးစိုက်ပျိုးမှုဧရိယာမှာ ၂၇၃မိုင်ကျယ်ဝန်းလာခဲ့ပါသည်။ ယင်းမှရရှိသောလယ်ခွန်တော်ငွေပေါင်းမှာလည်း ၂၈၅၀၀၀/ ဖြစ်သည်ဟု ဧရာဝတီတိုင်းမင်းကြီးက သူ၏အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သည် သမိုင်းဦးအချိန်ကာလကပင် မြောင်းမြခရိုင်အတွင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရန်သွားလာဆက်သွယ်ရေးအတွက်လမ်းဆုံကျသောမြို့ဖြစ်သော်လည်း အဓိကထွက်ကုန်မှာ ဆန်စပါးဖြစ်ပါသည်။ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာ နှမ်းထွက်နှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့်၁၉၈၃ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က ချီးမြှင့်သည့်ဆုကိုပင် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့၏ တန်ခိုးကြီး တာဝတိံသာမြတ်စွာဘုရားကြီးအပါအဝင် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ မြို့ဦး‌စေတီ၊ လောကသကျမာရဇိန်ကြေးဆင်းတုဘုရားကြီး၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီးတို့ကို ဖူးမျှော်နိုင်ပါသည်။ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့၏ တာဝတိံသာမြတ်စွာဘုရား ဝါကျွတ်ပွဲတော်သည်လွန်စွာစည်ကားသောအထင်ကရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်ကျင်းပသောရက်မှာ နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၄ ရက်မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး ဘုရားပွဲတော်သို့ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ဇာတ်အဖွဲ့များ၊ဈေးသည်များ အပြင် ဘုရားဖူးဧည့်သည်များလာရောက်ကြသဖြင့် လွန်စွာစည်ကားသောပွဲတော်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်လမြိုင်ကျွန်း&oldid=669893" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။